DAAWO:- CCWasarme oo Kismaayo ka sheegay in Dowladda Somalia ay doonayso waqti kororsi Fariina dagaalna udiray mucaaradka oo dhan. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:- CCWasarme oo Kismaayo ka sheegay in Dowladda Somalia ay doonayso waqti kororsi Fariina dagaalna udiray mucaaradka oo dhan.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku sugan Magaalada Kismaayo, islamarkaana Khudbad ka jeediyay Xafladda Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland ayaa Farriin adag u diray Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxaa uu sheegay hadii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay isku daydo in wadadii loogu tala galay doorashada ay ka leexiso ay la kulmi doonto dhibaato culus.
Madaxda dalka ayuu uga digay Muddo Kororsi iyo in doorashada soo socoto aysan noqon Mid xor iyo xalaal ah.
Previous articleDAAWO:- Aadan Barre Ducaale oo bahdilay DFS sheegayna in Jubbaland iyo Kenya ay yihiin dowlado walaalo ah oo xiriir leh.
Next articleDAAWO:- Faroole oo ku biiray fikirka Mucaardka “Villa Somalia Ficilkeeda waa burburinta dalka waana in loo heshiiyaa dagaalkeeda”.
Jaajuumoow October 12, 2019 At 5:43 pm
Aniga waxaan ahay shaqsi u dhashay qabiilka Hawiye. Midkaan badda gatay waan ka soo horjeedaa waxaan istusay midkaan in uu hoos ahaan ula jiro Farmaajo. Sababtoo ah gurigiisi waxaa lagu dilay lix qof asaga ilaalineysay ilaa iyo haddana ma ogo meel lagu duugay .
Diinta Islaamka xataa wuu qilaafay. Ina adeeradiisa meedkooda waxeey ahayd in meedka la dhaqo, Jinaaso lagu tukado ka dibna lagu duugin qabri wadareed. Caku uf.
Kan iyo Cumar Cabdirashiid waa in Maxkamad la soo taagaa.
Atoore October 13, 2019 At 1:27 am
C.C.Warsame ma hubno in uu gatay badda iyo dhulka soomaaliya ee ay kenya sheegatay.Maxaadse kaligiis eeda u saaraysaa oo adan u eedaynayn Shariif C.C.Sharma’arke?Labadaas nin baa markaas meesha masuul ka ahaa ee saas la soco.Hadda ka hor mar Dubay shir lagu qabtay oo uu joogay Cabdishakuur baa shirkii dad ku eedeeyaan hadalka ad tiri oo kale.Waxuuna ku jawaabay oo uu yiri waakan Cumar C.C.Rashiid ee weydiiya isaga.Marka meesha waxaa ka cad in ay wada ogaayeen arintaas saddexda ninba.
Atoore October 13, 2019 At 1:44 am
Jaajuumoowoow dhawr su’aalood oo wada gaaban.
1.Waad ogtahay oo maamulkii M.S.Bare waxaa riday USC oo ah beelaha hawiye.Markii uu baxay M.S.Bare maxay hawiye u suubin waayeen dawlad oo ay wadanka u maamuli waayeen?
2.Maxay u xasuuqeen Shacabweynihii soomaaliweeyn meesshii laga filayey in ay nabad geliyaan shacabka somaaliyeed?
3.Maadaama uu hawiye suubiyey fafal kala daran maxaysan wali u oran war soomaaliyeey qalad baa dhacay ee raali hanala ka hadaado,wixii maal ah oo hadda la hayana waa naga wada celis?
4.Maadaama Hawiye xamar looga tagay maxay hawiye isu laynayaan 28 sano oo isku xiga?
5.Dawlad kasta oo la soo dhisa oo xamar la keeno hawiyaa ka horyimaada ee maxay tahay ujeedadu?
6.Meelkasta oo ka mida deegaanada soomaaliya ee ay u badan tahay beesha Hawiye dagaalaa ka jira ee maxay tahay sababtaasu?
7.Wax garadka Hawiye maxaysan uga hadlin shacabka masaakiintaa ee intaas lagu xasuuqayo deegaanada Hawiye?
8.Qaraxii Soobe waxaa ku dhintay baa la yiri ugu yaraan 1,000 qof iyo dhawaacyo ka sii badan ee yay hawiye saareen dambigaas?
Mase ogtahay dadkaas ku dhintay qaraxii Soobe in ay ka mid ahaayeen 198 hooyooyin oo ka tagay 333 caruura?